शैक्षिक क्रियाकलाप खुल्ला गर्नु आवश्यक | Aaja ko Shiksha
शैक्षिक क्रियाकलाप खुल्ला गर्नु आवश्यक
असार १ गतेदेखि विद्यालय प्रशासन खोेल्ने सरकारी निर्णय/निर्देशनसँगै कतिपय स्थानीय निकायले कडा सूचना जारी गरेर शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा अनिवार्य हाजिर हुन अर्काे सूचना जारी गरे । त्यसपछि आफ्नो घरमा लकडाउन खेपिरहेका टाढा–टाढाका शिक्षकहरू यातायात सिफारिश–पास, गाडी रिजर्भ तथा अनेक दुःखकष्ट झेलेर विद्यालय पुगेका छन् । तर विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने औपचारिक अनुमति नहुँदा एकातिर विद्यालयहरू सुनसान छन् भने अर्कातिर स्कूल जानु नपरेपछि घरमै रहेका आफ्ना बाबुनानीहरूलाई सम्हाल्न गाह्रो परेको गुनासो अधिकांश अभिभावकहरूको छ । हुन पनि, खाली दिमागमा शैतानले घर बनाउँछ भन्छन् । त्यसैले अधिकांश शहरिया फुर्सदिला बालबालिका तथा युवा पुस्ता यतिखेर पूरै बरालसिङ भएका छन् ।
बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्म मोबाइल र ल्यापटप र आइप्याडमा एकोहोरिँदा कतिपयको आँखा बिग्रने सम्भावना देखिँदै छन् । खुला ठाउँ, खेतीपाती, लेकबेंसी, पशुपालनका कारण पहाडतिर भने यो अवस्था कमै छ । बालसुलभ बानीका कारण, खानमा रोड्याइँ गर्ने, खेल्ने र साथीहरूसँग अनावश्यक खेलकुदमा बरालिनेहरू पनि धेरै छन् । मादक पदार्थ सेवनमा लाग्ने तथा डिप्रेसनको रोगी बन्नेहरू पनि भइसके । शैक्षिक क्रियाकलाप नभएका कारण यो पुस्तै बिग्रिरहेको अवस्था छ । यसरी अभिभावकको नियन्त्रणबाहिर जाँदै गरेका बालबालिकालाई सुधारेर संयममा राख्न पछि निकै गाह्रो पर्न सक्छ ।
कोरोना पूरै नियन्त्रण हुन कति समय लाग्ने हो, थाहा छैन । यो अवस्थामा–एउटा शहर, एउटा जिल्ला, एउटा गाउँमा एकजना र दुईजना संक्रमित हुँदैमा सबैतिर शैक्षिक क्रियाकलाप बन्द गर्न मिल्दैन । अब पनि, क्वारिन्टिन नभएका र सुरक्षित विद्यालयहरूमा पठनपाठन नथाल्नु भनेको सरकारी शैक्षिक उदासीनता र शिक्षकहरूको अल्छ्याइँ ठहरिन्छ ।
लकडाउनका बेलामा पनि अत्यावश्यक काम चलेकै छ । अत्यावश्यक कामभित्र शैक्षिक क्रियाकलापलाई पनि समावेश गरिनु पर्छ । विद्यालय खोल्नुभन्दा पहिला सार्वजनिक यातायात खोल्नुपर्ने तर्क पनि छ । यो ठीक हो । तर, लामो दूरीका लागि दुई स्थानीय तहले सहजीकरण गरिरहेकै छन् । छोटो दूरीका लागि साइकल हुन सक्छ । हिँडेर पनि दुःख गर्न सकिन्छ । सबै ठीकठाक होला भनेर सुख भोग्ने आशामा बस्दाबस्दै अवस्था खराब हुँदैछ ।
प्रायः शहरी क्षेत्रका विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालित छ । कतिपय विद्यालयमा शिफ्ट सिस्टम चलाइएको पनि देखिन्छ । पहाडी क्षेत्रका, थोरै शिक्षकका कारण शिफ्ट सिस्टम चलाउन नसकिने विद्यालयमा जोरबिजोर रोल नं का आधारमा विद्यार्थीलाई बोलाउँदा पनि हुन्छ । अझ, आधारभूत तह मात्र सञ्चालित स्थानीय शिक्षक र स्थानीय विद्यार्थी मात्र भएका गाउँले विद्यालयहरू त पूर्ववत् ढङ्गले सञ्चालन गर्दा केही पनि फरक पर्दै पर्दैन । लौन ! यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् !
(लेखक, ओखलढुङ्गाको खानीभञ्ज्याङस्थित सरस्वती माविका शिक्षक हुनुहुन्छ ।)